श्रीपञ्चमी अर्थात सरस्वति पुजा - Yohosamachar
श्रीपञ्चमी अर्थात सरस्वति पुजा
माघ शुक्ल पञ्चमी अथवा श्रीपञ्चमी जसलाई बसन्त पञ्चमी भनिन्छ। प्राचीन वर्षमा साललाई ६ ऋतुहरूमा बाँडिन्थ्यो। ती ६ ऋतुहरूमा बसन्त ऋतु मानिसहरूको मनपर्दो ऋतु थियो ।
जब फूलहरूमा बहार आउँथ्यो, जौ र गहूँका बालीहरू लहराउँथे, आँपका रूखहरूबाट सुगन्ध फैलिन्थ्यो र चारैतिर रङ्गीबिरङ्गी पुतलीहरू उड्न थाल्थ्यो। बसन्त ऋतुको स्वागत गर्न माघ महिनाको चान्द्रमाण पञ्चाङ्ग अनुसार पाँचौ दिन एउटा ठूलो उत्सव मनाइन्थ्यो जसमा विष्णु र कामदेवलाई पूजा गरिन्थ्यो, यसैलाई बसन्त पञ्चमीको पर्व भनिन्थ्यो।
कामदेव भनेका प्रेमका देवता हुन्। उनकै पूजा गर्ने दिनलाई प्रणय दिवस पनि भनिन्छ। शास्त्रहरूमा बसन्त पञ्चमीलाई ऋषि पञ्चमी भनेर उल्लेख गरिएको छ र पुराण-शास्त्रहरू तथा अनेक काव्यग्रन्थहरूमा पनि अलग-अलग ढङ्गले यसको चित्रण गरेको पाइन्छ।
यसै अवसरमा आज हामी तपाईँहरूलाई सरस्वती देवीको चित्रमा लुकेका केहि जीवनमन्त्रहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँः
१. शुद्ध चित्त
सरस्वती मातालाई जहिले पनि सेतो वस्त्रमा देखिन्छ। यसले दुई कुराको सङ्केत गर्दछ। पहिलो- हाम्रो ज्ञान निर्मल हुनुपर्छ, विकृत हुनुहुँदैन। जस्तोसुकै ज्ञान आर्जन गरेपनि त्यो सकारात्मक हुनु जरुरी छ। दोश्रो- विद्यार्थी जीवनमा हाम्रो चरित्रमा कुनै दुर्गुण हुनुहुँदैन र हाम्रो चित्र सफा हुनुपर्दछ।
२. अनन्त ज्ञान
सरस्वती देवीको एउटा हातमा पुस्तक देख्न सकिन्छ, यसले के सन्देश दिन्छ भन्दा हामी विद्यार्थिहरूको लगाव पुस्तकप्रति हुनुपर्दछ, साहित्यप्रति हुनुपर्दछ। विद्यार्थीको भौतिक शरीर पुस्तकसँगै नभएपनि उसको मन र मस्तिष्क जहिले पनि पुस्तकसँगै हुनुपर्दछ। तब मात्र अनन्त ज्ञान हाँसील गर्न सकिन्छ।
अर्को हातमा माला देख्न सकिन्छ। यसले हामीले सँधै चिन्तन गरिरहनुपर्छ भनेर सङ्केत गर्दछ। हामीले जुन ज्ञान आर्जन गरिरहेका छौँ, त्यसको लगातार मनन गर्नुपर्दछ।
४. अचल मस्तिष्क
सरस्वती देवीको दुई हातले विणाको वादन गरेको देख्न सकिन्छ। विद्यार्थीले पुस्तकको ज्ञान मात्र होइन, सङ्गीत जस्तो ललित कलाप्रति पनि रुची राख्नुपर्दछ। सङ्गीले हाम्रो मन, मुटु र मस्तिष्कलाई शुद्ध र अचल बनाउँदछ, शान्त बनाउँदछ। साथै सुमधुर सङ्गीतले हाम्रो स्मरण शक्तिमा पनि सुधार ल्याउँदछ।
चित्रमा सरस्वती देवी एकान्त नदी किनारमा बसेको देख्न सकिन्छ। यसले के सन्देश प्रदान गर्छ भन्दा विद्या आर्जनको लागि कहिलेकाहिँ एकान्तको पनि आवश्यक पर्दछ। एकान्तमा मात्रै हाम्रो मन एकाग्र हुन सक्दछ, तब मात्रै ज्ञानको मनन गर्न सकिन्छ।
सरस्वतीको पछाडिपट्टि सूर्य उदाईरहेको पनि देख्न सकिन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा पढ्नको लागि सबैभन्दा उचित समय भनेको विहान हो।
७. बुद्धि, रचना र विश्लेषण
सरस्वतीको अगाडि दुईवटा हाँस छन्। हाँस सरस्वतीको वहान हो र एक हाँस बुद्धिको प्रतिक हो भने अर्को हाँस रचनाको प्रतिक हो। यसले के सङ्केत गर्दछ त भन्दा, हामी बुद्धिमानी मात्रै होइन हाम्रो बुद्धिलाई रचनात्मक र विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
← कुन बारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने?
शिवजीलाई चढाउनै नहुने यी ५ पवित्र वस्तु →